Risa Taneda – Cast – MMANIME
Zombie Land Saga Zombieland Saga Info Anime Title: Zombieland Saga Japanese: ゾンビランドサガ Genre: Comedy, Music, Supernatural Type: TV Status: Finish Airing Episode: 12 Aired: Oct 4, 2018 to Dec 20, 2018 Season: Fall 2018 Studio: MAPPA Duration: 23 min per ep Score: 7.59 Synopsis : အထက္တန္းေက်ာင္းသူေလး Sakura Miamoto ဟာ 2008 ခုႏွစ္မွာ ကားအက္စီးဒင့္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ရပါတယ္ ... ၁၀ ႏွစ္ၾကာေတာ့ Tatsumi Kotaro ဆိုတဲ့သူဟာ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ Saga ၿမိဳ႕နယ္ေလးကို ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ Sakura နဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ကနာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ...
TMDb: 8.3/10 61 votes
Is It Wrong to Try to Pick Up Girls inaDungeon? Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Info Anime Title: Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Japanese: ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか Genres: Action, Adventure, Comedy, Romance, Fantasy Type: TV Status: Finished Airing Episode: 13 Aired: Apr 4, 2015 to Jun 27, 2015 Season: Spring 2015 Studio: J.C.Staff Duration: 24 min per ep Score: 7.7 Synopsis : Life in the ...
Food Wars! Shokugeki no Soma Food Wars season ................................... အဖေဖြစ်သူနှင့်အတူတူ စားသောက်ဆိုင်လေးဖွင့်နေတဲ့ဆိုမာဟာ တစ်ရက်မှာတော့အဖေဖြစ်သူက တော့စ်ခိကျောင်းကြီးမှာသွားတက်ဖို့တိုက်တွန်းလာတဲ့အတွက်သွားတက်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကျောင်းဟာ သာမန်ကျောင်းမဟုတ်ပဲ ဈေးကွက်ကိုပါလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ချက်ပြုတ်ရေးကျောင်းဖြစ်နေတဲ့အပြင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေလည်းလုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အတွက် ကျောင်းပြီးအောင်မတက်နိုင်သူတွေ၊ကျောင်းကထွက်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတဲ့ကျောင်းပါ။ ပြီးတော့အတော်တကာ့အတော်ဆုံးလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ရွေးစင်ဆယ်ယောက်အဖွဲ့လည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အကြောင်းကိုသိသွားတဲ့ဆိုမာဟာ နံပါတ်တစ်နေရာကိုယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဆိုမာဘာတွေကြုံတွေ့ရမလဲ။အခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ TMDb 7.7/10 Episode runtime 24 minites Season 1 All episode 720p(lol anime myanmar) Season2All Episode 720p(lol anime myanmar) Season3All Episode 720p(Golden Anime) Translated by Kan San Encoded by Shine Bo Bo Latt Season4EPISODE 1 EPISODE2EPISODE3EPISODE4EPISODE5EPISODE6EPISODE7EPISODE 8 EPISODE9EPISODE 10 EPISODE 11 EPISODE 12 ********************* Season  Episode 1 [1080p] Yandex / Racaty / Gdrive / Usersdrive Episode2[1080p] Yandex / Racaty / ...
TMDb: 8.4/10 127 votes
Aokana: Four Rhythm Across the Blue လူသားတွေက ကမ္ဘာမြေဆွဲအားကိုဆန့်ကျင့်ပီး ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ဖိနပ်တွေကို ထွင်လာနိုင်ခဲ့တယ် အဲ့တော့ လူသားတွေကလဲ မတူညီတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံတွေ, အတွေ့အကြုံတေကို ခံစားလာရတယ် အဲ့အပြင် ပျံသန်းလာနိုင်တဲ့ အတွက် ကစားနည်းအသစ်တခုပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ အဲ့တာ ကိုflying circus လို့ခေါ်ခဲ့တယ် asuka kunahamaအထက်တန်းကျောင်းကိုပြောင်းလာခဲ့တဲ့ သူမက အဲ့ဒီ ကစားပွဲ (world of flight) ကို ဘာမန်းမသိဘဲ စာရင်းပေးမိခဲ့တဲ့အခါမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့... #LCAM Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 -----End----
Brynhildr in the Darkness Brynhildr in the darkness ဒီanime ကတော့ ကျတော်ကြည့်ဖူးတဲ့ school romance sci-fi genres တွေကနေ ကွဲထွက်နေတဲ့ တစ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ Mystery ဆန်ဆန် နဲ့ ဇာတ်လမ်း အစကနေ အဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ plot ရယ်( Waifu လေးတွေ cute ဖြစ်တာရယ် :XD) ကြောင့်ပါ။ Plot ကတော့ Ryota Murakami ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက သူရဲ့အချစ်ဦး Kuroneko နဲ့အတူ ညတိုင်း အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့တခြားကမ္ဘာက ဂြိုလ်သားတွေကို ရှာလေ့ရှိပါတယ်။ Ryota ကတော့ တကယ်မရှိမှန်း ကိုသိပေမဲ့ သူ မကတော့ ဂြိုလ်သားတွေဆိုတာ တကယ်ရှိကြောင်း သူမနဲ့ တစ်ခါဆုံဖူးကြောင်း အမြဲတမ်းပဲပြောလေ့ရှိပါတယ် ။ တစ်ရက် Kuroneko က သူမရဲ့ ရိုးသားမှု့ကို ...
Glasslip Glasslip Anime Title - Glasslip Genres - Slice of Life, Romance, Supernatural Episodes - 13 Aired - Jul 3,2014 to Sep 25,2014 Translator - Deku Review Fulami Touko ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးက ဖန္ခ်က္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕သမီးျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အားလပ္ရက္ေတြကို "Kazemichi'' ဆိုတဲ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ ကုန္ဆံုးေလ့႐ွိတယ္... တတိယႏွစ္ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ သူတို႔ေက်ာင္းကို ေျပာင္းလာတဲ့ Okikura Kakeru ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔ေတြ႔ခဲ့တယ္...... အဲ့ေကာင္ေလးက သူကအနာဂတ္က အသံေတြၾကားရတယ္လို႔သူ႔ကိုေျပာျပတယ္..... အကယ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္ကအနာဂတ္ကိုသာ ႀကိဳသိရမယ္ဆိုရင္ သူဘာေတြမ်ား သိခ်င္မလဲ? Note - ၃ ရက္တစ္ပိုင္းနဲ႕ တစ္ပတ္ကို ၂ ပိုင္းတင္ဆက္ေပးသြား ပါ့မယ္ … မနက္ျဖန္ စတင္မွာပါေနာ္ By Deku #bk ep ...